Adityaniswe PA380 VC ngemiqulu A350 Lweposi, kunokwenzeka?
umbuzo Adityaniswe PA380 VC ngemiqulu A350 Lweposi, kunokwenzeka?
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #481 by JanneAir15
Molo! Ndiye ulande A350 ukuhlanganisa pack kwaye ndicinga ukuba lo A350 intle uyakwazi ukufumana i FSX ngoku kodwa kukho ingxaki enkulu nayo it isenguye A320 enye / A330 ezifana moya yaye ndandicinga ukuba kube lula ukudibanisa i VC evela Project Airbus A380 lo moya. Yiyo loo nto loo A380 VC kuba yiloo ikufutshane ukuba ndikwazi (ngokuba akukho A350 VCs). Ngoko ke ungandinceda nale? Sele wazama ezinye Iimfundiso kodwa lutho.
Nalu Ukuhlanganiswa A350:
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #484 by Gh0stRider203
Enza search google ngokukhawuleza xa ndibona ngokunyanisekileyo zange kwenziwe oku, yenyuka nale vidiyo. Ndiyathemba ukuba kuyanceda!
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #485 by JanneAir15
Sele ndibukela vidiyo yaye wazama neendlela kodwa akazange asebenze. Yiloo nto ndicela ukubuza apha.
Yeah Ndiye wafikelela kwisigqibo sokuba oko akwenzeki. I bahlolwe iifayile yonke into efunekayo kodwa akwenzeki nangona sele MDLXMDLH apho ividiyo uthi kodwa mna kuvavanywa yonke namnye kubo isebenza kunjalo ngokwenene Andazi ukuba mandithini. Kodwa ke ukuba umntu angakwazi ukwenza ukuba usebenza ngoko nceda sixelele indlela lapha.
Ixesha ukwenza page: 0.105 imizuzwana